Home Wararka WAR DEG DEG:Qarax iyo dil ka dhacay Magaalada Muqdisho+Xaalada oo cakiran
WAR DEG DEG:Qarax iyo dil ka dhacay Magaalada Muqdisho+Xaalada oo cakiran
War goordhow nasoo gaaray ayaa sheegaya in Abaare 1:30PM Daqiiqo uu Qarax ka dhacay Meel Udhaw Isgoyska Bakaaraha Qeybta soo xigta Degmada Hodan.
Qaraxa ayaa ahaa Bambaanada gacanta laga tuuro,waxaana ka horeeyey Dil loo geystay Nin lagu soo koobay Magaciisa Dhuceey.
Dilka markii uu dhacay ayaa waxaa goobta kusoo xoomay Ciidamada Amniga taas oo keentay in Qaraxaasi F1-ta lagu Weeraro.
Dhaawacyo ayaa jira oo ciidanka soo gaaray,muddo kala carar ayaa ka jiray Isgoyska Bakaaraha oo Qaraxa iyo Dilka uu ka dhacay.
Previous articleDhageyso:Ehlada Axmed dowlo oo dalbaday in cadaalada lasoo taago dadkii dilkiisa ka danbeeyay&Banaanbax looga soo horjeedo dilkaas oo Muqdisho ka dhacay+Sawiro
Next articleFaah Faahin: Shilal iyo Qaraxyo dad ay ku dhinteen oo ka dhacay Magaalada Muqdisho+Sawiro